Gold and Exchange Rate
Subscribe the Gold and Exchange Service to get the rates from Myanmar Central Banks and International exchange rates in the market. Send GER to 8602 with 105 kyats per day to subscribe and contact 106 for more details.
Gold & Exchange Rate
Q - Gold and Exchange ၀န်ဆောင်မှုကိုယူရင် ဘာတွေရမှာလဲ
A - နေ့ စဉ်ပြောင်းလဲနေသော ရွှေဈေးတွေနဲ့ ဒေါ်လာဈေးတွေရမှာပါ။
Q - ရွှေဈေးတွေက ဘယ်လိုဈေးတွေရမှာလဲ
A - ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး ၊ ရန်ကုန်ရွှေဈေးနဲ့မန္တလေးရွှေဈေး တို့ ကိုပို့ ပေးမှာပါ
Q - ဒေါ်လာဈေးတွေက ဘယ်လိုဈေးတွေရမှာလဲ
A - အမေရိကန်ဒေါ်လာ , Earning ,စင်္ကာပူဒေါ်လာ နဲ့ယူရိုဈေးတွေအပြင် တစ်ဒေါ်လာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားငွေဈေးတွေပါ ပို့ ပေးမှာပါ
Q - Gold and Exchange ၀န်ဆောင်မှုကိုလိုချင်ရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ
A - GER လို့ ရေးပြီး 8602 ကို Message ပေးပို့ ပေးပါ။ထို့ နောက်9ထပ်ပို့ ပေးပြီး ၀န်ဆောင်မှုရယူရန် အတည်ပြုပါ
Q - GER လို့ ရေးပြီးပို့ ပေးရင်ရပြီလား
A - GER လို့ ရေးပို့ပြီးရင်9ထပ်ပို့ ပြီးအတည်ပြုပေးရပါသည်။
Q - GER လို့ ပို့ ပေးရင် ၀န်ဆောင်မှုရပြီလား
A - GER လို့ ပို့ ပါ။ထို့ နောက် ၉လို့ ပို့ပေးပြီး ရင် ၀န်ဆောင်မှုအောင်မြင်ကြောင်းစာတိုတစ်စောင်နဲ့ အတူ အနီးဆုံးပို့ ထားသော ၀န်ဆောင်မှုစာတိုကိုပါပို့ ပေးသွားမှာပါ
Q - Gold and Exchange ၀န်ဆောင်မှုကို ဘယ်ဖုန်းနဲ့ မဆိုယူလို့ ရလား
A - MPT ဖုန်းနဲ့ ယူပေးရမှာပါ
Q - Gold and Exchange ၀န်ဆောင်မှုကိုယူထားရင် ၀န်ဆောင်ခဘယ်လိုပေးရပါသလဲ
A - Gold and Exchange ၀န်ဆောင်မှုကိုယူထားရင် တစ်ရက်ကို ၁၀၅ကျပ် (5% Taxပါ) ပေးရမှာပါ
Q - Gold and Exchange ၀န်ဆောင်မှုကိုယူထားရင် ဘယ်အချိန်တွေမှာပို့ ပေးမှာလဲ
A - တနင်္လာနေ့ ကနေ စနေနေ့ ထိကို မနက် (၁၀) ခွဲမှာ CB Bank ဈေးနဲ့နေ့ လည် ၁၂ခွဲ / ၃ခွဲတွေမှာ ရွှေဈေးနဲ့အပြင်ဒေါ်လာဈေးတွေကိုပို့ ပေးသွားမှာပါ။
တနင်္ဂနွေနေ့ မှာတော့ နေ့ လည် ၁၂ခွဲ / ၃ခွဲတွေမှာ ရွှေဈေးနဲ့အပြင်ဒေါ်လာဈေးတွေကိုပို့ ပေးသွားမှာပါ။
Q - Phone Bill မရှိတဲ့ရက်တွေမှာကောပို့ ပေးမှာလား
A - Phone Bill မရှိတဲ့ရက်တွေမှာ ပို့ ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်နေ့ မှာလည်း ပေါင်းမဖြတ်ပါဘူး။
Q - ၀န်ဆောင်ခကို ဘယ်အချိန်မှာ ဖြတ်ပါသလည်း
A - ပထမဦးဆုံး Message ကို လက်ခံရရှိတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ပြီး နောက် Message တွေမှာတော့ မဖြတ်တော့ပါဘူး
Q - ပထမ Message လာတဲ့အချိန် Phone Bill မရှိပဲ ပြီးမှ Bill ဖြည့်မိရင်ကော ၀န်ဆောင်မှုကိုပို့ ပေးမှာလား
A - ပထမ Message လာတဲ့အချိန် Phone Bill မရှိပေမယ့် နောက်Message တွေပို့ ပေးတဲ့အချိန်မှာ Bill ရှိခဲ့ရင် ပထမ Message ကော နောက်Message ကော အကုန်ပို့ ပေးပါတယ်
Q - Gold and Exchange ၀န်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့် ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
A - Gold and Exchange ၀န်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့် ချင် "GER OFF" လို့ ရေးပြီးပို့ ပေးရမှာပါ
Q - What will Iget from the Gold and Exchange service?
A - You will get the daily update of gold and exchange rates.
Q - What Gold rates will I will be getting?
A - Gold rates of Global, Yangon and Mandalay.
Q - Which exchange rates will I be getting?
A - US Dollar, Earning, Singapore Dollar and Euro including the rates equivilant to 1 dollar.
Q - How to subscribe to Gold and Exchange Service?
A - Send GER to 8602 with SMS and then send9to confirm for subscription.
Q - Will I be subscribed after sending just only GER?
A – No, you will be subscribed after sending9after sending GER to confirm for subscription.
Q - Will I be successfully subscribed after sending GER?
A - No, you will be subscribed after sending9after sending GER to confirm for subscription.
And will get the confirmation message with the latest update exchange rates.
Q - Can I subscribe to Gold and Exchange Service with any operator?
A - No, you can only subscribe with MPT phone.
Q - How much does it cost to subscribe Gold and Exhange Service?
A - You will charged 105 Kyats (5% tax included) daily.
Q - When will I get the service after subscribing?
A - You will get the exchange rates from CB Bank on Moday to Saturday at 10:30 AM and the gold rates and private exchange rates at 12:30 PM and 3:50 PM. On Sunday, you will get the gold and exchange rates at 12:30 PM and 3:30 PM.
Q - Will I get the service if I don't have any balance?
A - No, you will not get anything if you don't have balance to your phone nor you will charged on the following day.
Q - When will I get charged for the service?
A - You will be charged on the very first message you receive but will be not charged for the rest of the day.
Q - I don't have any balance at the time of the first message, but I top-up after that. Will I get the service?
A - Yes, if you top-up your phone by the time of the second message, you will get the previous message with last update.
Q - How do I unsubscribe from the service?
A - Please send GER OFF to 8602
ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
ဤစာမျက်နှာသည် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ရယူသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာ ရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု အား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊“ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ရယူ နိုင်ပါသည်။ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ကို Blue Planet Co.,Ltd (“Blue Planet” ၊ “BP” ၊ “ကျွန်ုပ်တို့” ၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို” ၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏”)) က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ရယူခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့၏ ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ”ဟုခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါ သည်။
စည်းကမ်းချက်များသည် အချိန်အခါမရွေး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခု ပြုလုပ်ပြီးနောက် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု တွင် သင်၏ဆက်လက်ရယူခြင်းသည် ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သော စည်းကမ်း ချက်များကို သင်က လက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု
၁.၁ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ကို Blue Planet က အပြည့်အဝ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု တွင် MPT ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အတိုင်း အတာသည် အောက်တွင်ထပ်မံရှင်းလင်းဖော်ပြမည့် ကျသင့်ငွေကောက်ခံခြင်း (Bill) နှင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲခြင်း (Subscription) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
၁.၂ စည်းကမ်းချက်များတွင် သင်အား အတိအလင်း အပ်နှင်းထားခြင်းမရှိသည့် အခွင့်အရေးအားလုံးကို MPT ၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူ များ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများက သီးသန့် ရယူထိန်း သိမ်းထားပါသည်။သင်အနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းသာ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ရယူ နိုင်ပြီး အခြားသောအသုံးပြုခံစားမှုအားလုံးကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ် ထားပါသည်။
၁.၃ MPTသည် MPT ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်း ပြချက်မရှိဘဲသင်၏ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု သို့ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှူ ရယူခြင်း ကို အကြောင်းကြားမှုနှင့်တာဝန်မရှိဘဲ အမြဲတမ်းသော်လည်းကောင်း၊ ယာယီသော်လည်းကောင်းရပ်စဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ခွင့်ပြုရန်ငြင်း ပယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် စည်းကမ်းချက်များသည် ဤတွင်ဖော်ပြထားသောဆက်လက်တည်ရှိနေမည့် စည်းကမ်းချက်များ ကို ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သော အတိုင်းအတာအထိ သင်အပေါ် ဆက်လက်စည်းနှောင်မှုရှိရမည်။
၁.၄ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု တွင် သင်၏ ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောနှင့် ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိ သော ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်းများပေါ် မူတည်နိုင်သည်။ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ၏ အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ (စီစဉ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ စီစဉ်မထားဘဲဖြစ်စေ) ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် မဝင်ရောက်နိုင် ခြင်းတစ်ခုခုအတွက် MPT သည် သင့်အပေါ် သို့မဟုတ် BP အပေါ် တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်သည်ကို သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။
၁.၅ သင်၏ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ သင်၏ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် မည် သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်မဆို သို့မဟုတ် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်၏ အခြားဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုအတွက် BP တွင် တာဝန် မရှိစေရ။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ
BP မှ အခြားနည်းဖြင့် တရားသဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ လွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဤ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု နှင့်စပ်လျဉ်းသော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့် အကြောင်းအရာ အပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာ မဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) BP ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက် တစ်ခုခုနှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဉာဏပစ္စည်းအခွင့်အရေးများ အားလုံးမှာ BP နှင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသောအကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများ၏ သီးသန့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အတိအလင်း ဖော်ပြ ထားသည်မှလွဲ၍ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများတစ်ခုခုတွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသော အသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန် တီးသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊ အသုံးပြု ခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန်
ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော် သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် မပြုလုပ် ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှ အတိအလင်းခွင့်ပြုမထားသောမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆို အကြောင်းအရာအားအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
၃.၁ သင့်အနေဖြင့် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ကို 8602 သို့ GER ဟု ရေးသားပေးပို့ခြင်းဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။
၄.၁။ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ကို MPT ဆင်းကတ်အသုံးပြုသူတွေထဲက အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူများ ရယူနိုင်ပါသည်။
၅။ ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း
BP အနေဖြင့် *နာမည်*စာတိုဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဆက်စပ်သော ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်းကောင်း၊ လူသိများစေရန်ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ပါဝင် ကံစမ်းသူများ၏ဗီဒီယိုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ ချည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားသော BP ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဈေး ကွက်ရှာဖွေရန်၊ ကြော်ငြာရန် နှင့်/သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ရန် အလို့ငှာ ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူများ ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကောက်ခံခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အကြား ဝေမျှခြင်းတို့ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်းကို ပါဝင်ကံ စမ်းသူများက သဘောတူညီပြီး ခွင့်ပြုပါသည်။
သင်သည် BP နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ ပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၊ အေးဂျင့်များ၊ မန်နေဂျာများ နှင့် အခြားဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ အရာထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာများအား (၁) သင်ထုတ်လွှတ်လိုက်သော သို့မဟုတ် ရရှိ သောဒေတာ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအပါအဝင် သင်၏ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု အား အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဝင်ရောက်ခြင်း (၂) ဤတွင်ပါဝင်သော ကိုယ်စားပြုတင်ပြခြင်းများနှင့် အာမခံချက်များတစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်ခြင်း အပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော စည်းကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းတစ်ခုခု အား ချိုးဖောက်ခြင်း (၃) ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦးတစ် ယောက်၏ ကျော်ကြားမှုကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများအား အလွှဲသုံးစားပြုခြင်းကို ကာကွယ်သည့် အခွင့် အရေးများ (Publicity Rights) သို့မဟုတ်၊ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေး များ အပါအဝင် ၎င်းတို့ ချည်းသာမဟုတ်သော တတိယပုဂ္ဂိုလ်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုကို သင့်အနေဖြင့် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၄) သင်၏ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း တစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၅) ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု မှတစ်ဆင့် သင်တင်ပြသော သို့မ ဟုတ် သင်ရရှိသော အချက်အလက်တစ်ခုခု၏ ရလဒ်တစ်ခုကြောင့် တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် (၆) သင်၏ဖုန်းနံပါတ်(စာရင်းသွင်းထားသည်ဖြစ်စေ၊ စာရင်းမသွင်း ထားသည်ဖြစ်စေ)၊ ဟန်းဆက်၊ သို့မဟုတ် အခြားသော ကိရိယာမှတဆင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဦး၏ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု သို့ဝင်ရောက်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့မှ ပေါ်ပေါက်လာသော တောင်းဆိုမှုများ၊ နစ်နာမှု များ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တာဝန်ခံမှုများ၊ ကုန်ကျမှုများ သို့မဟုတ် ကြွေးမြီနှင့် အသုံးစရိတ် များ (ရှေ့နေ့ခများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသော) တစ်ခုခု နှင့် အားလုံးထံမှနှင့် ၎င်းတို့ကို ဆန့်ကျင်၍ ကာကွယ်ပေးရန်၊ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုမှ ကင်း လွတ်စေရန်သဘောတူပါသည်။
၇။ အာမခံချက်များ၏ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်များနှင့် တာဝန်ခံမှုကန့်သတ်ချက်
၇.၁ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်)နှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဤနေရာ၌ “ရှိသည့်အတိုင်း” နှင့် “ရှိနိုင် မည့်အတိုင်း” ရနိုင်သောစနစ်ဖြင့်ပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။ MPT နှင့် BP သည် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု လည်ပတ်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု မှတဆင့် အခြားနည်းဖြင့်သင်အသုံး ပြု နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော ၎င်း၏တိကျမှုအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက် အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို မည် သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သော အတိအလင်းဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်စားပြု တင်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် အာမခံချက်များမပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှုသည် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ကို မိမိဘာသာတာဝန်ယူသည်ဟု အတိအလင်း သဘောတူပါသည်။
၇.၂ MPT နှင့် BP သည် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု တွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော၊ ဆက်စပ်၍ဖြစ်သော၊ ပြစ်ဒဏ်အရဖြစ်သော နှင့်/သို့မဟုတ် အကျိုးဆက် အားဖြင့်ဖြစ်သော နစ်နာမှုများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသော နစ်နာမှုတစ်စုံ တစ်ရာအတွက် တာဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၇.၃ သင်အနေဖြင့် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ရယူ ရာတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု နှင့် ဆက်စပ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်အရဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့် သဘောသဘာဝ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားမဆိုရှိသည့် ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှု၊ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပေးရန်တာဝန်ရှိမှုနှင့် အကျိုးဆက်များ တစ်ခုခုနှင့်အားလုံးမှ သော်လည်းကောင်း၊ MPT နှင့် BP ကိုထိုသို့ဖြစ်နိုင်ခြေအား အသိပေးပြီးသည့်တိုင် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု ရယူခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာေ သာ သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သော မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆိုထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ထိခိုက်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပါအဝ င် ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟု မကန့်သတ်လျက် ၎င်းတို့မှသော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာသောနှင့် ၎င်းတို့ကိုအကြောင်းပြုသော တောင်းခံမှု များ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ အခွင့်အရေးများ၊ တရားစွဲဆိုရန် အကြောင်းတို့မှ MPT နှင့် BPအားကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ရာသက်ပန် လွတ်ငြိမ်းစေရန် သဘောတူညီပါသည်။
၇.၄ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများမှ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုင်းအတာအလျောက် MPT နှင့် BP သည် ရည်ရွယ် ချက်တစ်ခုအတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရောင်းချနိုင်စွမ်း၏ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အာမခံချက်များ အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသောအတိအလင်းဖော်ပြထားသည့် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် မဟုတ်သည့် အာမခံချက်များအားလုံးကို မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုပါသည်။
၇.၅ ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများတွင် MPT နှင့် BP ဆာဗာများ သို့မဟုတ် MPT နှင့် BP မှ ပို့သောအီလက်ထရောက်နစ် ဆက်သွယ်မှုများသည် ဗိုင်းရပ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ ကင်းလွတ်ပါသည်ဟု MPT နှင့် BP က အာမခံခြင်း မပြုပါ။
၈။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ
ရွှေဈေးငွေဈေး ၀န်ဆောင်မှုစာတိုဝန်ဆောင်မှု တွင် Blue Planet Co.,Ltd အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပံ့ပိုးပေး ထားသောအကြောင်းအရာ(တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ)တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ် သော ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုအတွက် MPTတွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုခုအား ရည် ညွှန်းချက်သည် MPT က ထောက်ခံမှု၊ ကမကထပြုမှု သို့မဟုတ် အကြံပြုမှု မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ထိုသို့သွယ်ဝိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
၉. ၁ စည်းကမ်းချက်များသည် http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“GTC”) အရဖြစ်ရပါမည်။ ဤစည်းကမ်းချက်၏ စည်းကမ်းများနှင့် GTC အကြား ပဋိပက္ခတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ဤစည်း ကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းများက လွှမ်းမိုးရမည်။
၉. ၂ စည်းကမ်းချက်များသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများ နှင့် တရားရုံး သို့မ ဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့တစ်ခုမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြား ချက် သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက် တစ်ခုခုအရဖြစ်ရပါမည်။
၉. ၃ အကယ်၍ စည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် ၎င်းအကျုံးဝင်မှု၏ စည်းကမ်းများ ပဋိညာဉ်ပြုချက်၊ ပြဋ္ဌာန်း ချက်တစ်ခုခုအား တရားရုံးတစ်ခုခု သို့မဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအဖွဲ့တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ထို အကြောင်းအရာ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်မှ ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ တရားမဝင်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အာဏာမသက်ရောက်နိုင်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါက စည်းကမ်းချက်များ၏ ကျန်ရှိသော အပိုင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ စည်းကမ်းများ၊ ပဋိညာဉ်ပြုချက် သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်၏(တရားမဝင် ဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိကြာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှအပ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့် သက်ဆိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိစေရဘဲ စည်းကမ်းချက်များ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်စီသည် ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသော အများဆုံး အတိုင်းအတာအထိ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး အာဏာ သက်ရောက်မှု ဆက်လက်ရှိရမည်။
Gold and Exchange Rate SMS Service Terms and Conditions
This page explains the terms by which you agree to abide by when subscribed to SMS services by Blue Planet Co., Ltd. Users can subscribe to Gold and Exchange Rate SMS service through services provided by Myanmar Posts and Telecommunications (“MPT”). Gold and Exchange Rate SMS services is operated by and provided to you by Blue Planet Co., Ltd. (“BP”, us, we, our). By subscribing to Gold and Exchange Rate SMS service, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
The Terms are subject to change at any time. Your continued subscription to Gold and Exchange Rate SMS service after any such change constitutes your acceptance of the revised Terms.
1. Gold and Exchange Rate SMS Service
1.1 As mentioned above, Gold and Exchange Rate SMS service is fully operated by Blue Planet. The scope of MPT’s involvement with the Promotion is limited to billing and subscription functions only, which will be further explained below.
1.2 All rights not expressly granted to you in the Terms are reserved and retained by MPT and its licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. You may subscribe to Gold and Exchange Rate service only as permitted by the Terms and by law; all other uses are strictly prohibited.
1.3 MPT may permanently or temporarily terminate, suspend, or otherwise refuse to permit your access or subscription to Gold and Exchange Rate SMS service as determined in MPT’s sole discretion, without notice and liability for any or no reason. In such event, you shall continue to be bound by the Terms to the extent necessary to fulfill surviving terms contained herein.
1.4 Your subscription to Gold and Exchange Rate SMS service is subject to scheduled and unscheduled service interruptions. You agree that MPT will not be liable to you or BP for any interruption of service downtime (planned or unplanned) or access failure.
1.5 BP shall have no liability for your use or misuse of the Gold and Exchange Rate SMS service, any interactions you have with other users, or any other act or omission by you with regard to the Gold and Exchange Rate SMS service.
Any BP proprietary material related to Gold and Exchange Rate SMS service, including, without limitation, software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, videos, music, and content (collectively, “Content”), and all intellectual property rights related thereto, are the exclusive property of BP and its licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. Except as explicitly provided herein, nothing in the Terms shall be deemed to createalicense or right in or under any such intellectual property rights, and you agree not to sell, license, rent, modify, distribute, copy, reproduce, reverse engineer, transmit, publicly display, publicly perform, publish, adapt, edit or create derivative works from any materials or Content accessible on Gold and Exchange Rate SMS Service. Use of the Content for any purpose not expressly permitted by the Terms is strictly prohibited.
3.1 One may subscribe to Gold and Exchange Rate SMS service by sending GER to 8602.
4.1 The Gold and Exchange Rate SMS service is intended solely for MPT registered users (usingaMPT SIM) who are at least eighteen (18) years of age.
The subscribers agree and consent to BP collecting, using, disclosing and sharing amongst themselves the Participants’ personal data, and disclosing such personal data to BP’s authorized service providers and relevant third parties for purposes which are necessary or reasonably incidental to the 8602 SMS service, and to market, advertise and/or promote the goods or services of BP, including without limitation using videos and/or images of subscribers for publicity purposes.
You agree to defend, indemnify and hold harmless BP and its subsidiaries, joint operation partner, agents, managers, and other affiliated companies, and their employees, contractors, agents, officers and directors, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including but not limited to attorneys’ fees) arising from: (i) your use of and access to subscription of Gold and Exchange Rate SMS service, including any data or content transmitted or received by you; (ii) your violation of any term of the Terms, including without limitation your breach of any of the representations and warranties herein; (iii) your violation of any third-party right, including without limitation any right of privacy, publicity rights or intellectual property rights; (iv) your violation of any law, rule or regulation of the Union of Myanmar or any other country; (v) any claim or damages that arise asaresult of any information submitted or received by you through Gold and Exchange Rate SMS service; or (vi) any other party’s access and use of Gold and Exchange Rate SMS service through your phone number (registered or unregistered), handset, or other device.
7.1 Gold and Exchange Rate SMS SERVICE AND ALL INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) AND OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THEREIN ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. MPT AND BP MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THE PROMOTION, OR THE INFORMATION, INCLUDING ITS ACCURACY, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH SUBSCRIPTION TO Gold and Exchange Rate SMS SERVICE. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR SUBSCRIPTION OF Gold and Exchange Rate SMS SERVICE IS AT YOUR SOLE RISK.
7.2 MPT AND BP WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM SUBSCRIPTION OF Gold and Exchange Rate SMS SERVICE, OR FROM ANY INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE SUBSCRIPTION OF Gold and Exchange Rate SMS SERVICE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
7.3 BY SUBSCRIBING TO Gold and Exchange Rate SMS SERVICE, YOU AGREE TO HEREBY RELEASE AND FOREVER DISCHARGE MPT AND BP, AND TO INDEMNIFY MPT AND BP FROM ANY AND ALL CLAIMS, DEMANDS, RIGHTS, CAUSE OF ACTION OR ANY NATURE OR KIND, ARISING FROM AND BY REASON OF ANY AND ALL LOSS, INJURY, DAMAGE OR LIABILITY AND THE CONSEQUENCES THEREOF WHETHER DIRECT OR CONSEQUENTIAL IN CONNECTION WITH SUBSCIPTION OF Gold and Exchange Rate SMS SERVICE, REGARDLESS OF THE CAUSE THEREOF, AND EVEN IF MPT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY INJURY TO ANY PERSONS OR ANY DAMAGE CAUSED TO ANY PROPERTY WHILE PARTICIPATING IN THE CONTEST OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, SUBSCRIPTION OF Gold and Exchange Rate SMS SERVICE.
7.4 TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, MPT AND BP DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
7.5 MPT AND BP DOES NOT WARRANT THAT INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THEREIN, MPT SERVERS OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT FROM MPT ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS.
The Gold and Exchange Rate SMS servicemay aggregate content obtained or provided by third parties, including Blue Planet Co., Ltd (“Third Party Content”). As such, MPT is not responsible for such Third Party Content or any linked websites associated with Third Party Content. Reference to any information, products or services of third parties does not constitute or imply endorsement, sponsorship or recommendation by MPT.